Fepetran'ny sampana: Mamadika, mitombo ary manara-maso ny fampiharana finday | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 13, 2015 Douglas Karr
Metrik'ireo sampana manolotra sehatra iray manampy anao hamokatra rohy fampielezan-kevitra manerantany izay manampy anao hanana fahazoana raikitra ny fampiharana finday. Afaka manampy anao ny sehatr'izy ireo:
Avadiho ho mpampiasa fampiharana ny mpampiasa tranokala, amin'ny alàlan'ny pejy misy soratra-me-the-app na sora-baventy fampiharana iraisana
Ampio hitombo ny fampiharana anao amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra, fanentanana ary fanentanana.
Ampitomboy ny tahan'ny fampandehanana app amin'ny alàlan'ny fidirana sy fanentanana mandeha ho azy.
Araho tsara ny metrikan'ny fananganana fampiharana amin'ny alàlan'ny fantsona, mpampiasa na atiny.
Amin'ny alalan'ny fametrahana izany ny Sampana SDK ao amin'ny fampiharana iPhone na Android anao, ny rohy ao amin'ny Sampana dia mandalo ny angon-drakitra mifototra sy mifototra amin'ny alàlan'ny fametrahana, ahafahanao manamboatra ny zava-niainan'ny fampiharana manontolo arakaraka ny toerana niavian'ny mpampiasa anao. Azonao atao ny mamorona fandraisana anao manokana rehefa natolotry ny namanao ianao na manome tolotra apetraka aorinan'ny mpampiasa samihafa.
Ny sehatra dia manome anao ny Analytics mila manatsara ny fampielezan-kevitra amin'ny fampiharana ianao amin'ny fandrefesana ny fantsona sy ny hetsika rehetra. Amin'ny fampiasana rohy Rantsana dia azonao atao ny mandefa mpitsidika an-tranonkala amin'ny atiny ao amin'ny app anao, na dia tsy napetraka aza ny fampiharana.
Tags: sampanametrikan'ny sampanabranch.io